Natural Hair Care 2018 | Fikarakarana fiarovana sy fitantanana
Ahoana ny fomba hanatsarana ny fivoahanao farany amin'ny fananana sy ny fikojakojana!
Sasao ny torolàlana alohan'ny hanaovana:
Tena zava-dehibe ho anao ny manasa ny fanitarana anao conditioner ihany alohan'ny fametrahana azy. Izany dia manome antoka fa ny mena dia malefaka sy mangalatra maimaim-poana.
Manoro hevitra izahay Aussie Moist na Fisotroan-tsakafo Hiarahan'ny alikaola (azo jerena ao Walmart sy toeram-pivarotana fikarakarana bika eo an-toerana) na izay endri-pandaminana noforonina ho an'ny volo volo.
Esory daholo ny fifandraisana amin'ny lambam-pandaharam-boloo, ny volony dia mafana tanteraka amin'ny rano mafana mandra-pahavitan'ny tady rehetra. Amin'ny solosaina ihany, manetona ny volony avy eo amin'ny famolahana dipoaly lehibe, Denman borosy, boson-porofo na bentitra vovoka manamboatra ny fepetra amin'ny alalan'ny volo ary misaraka.
Fa ny Kinky Curly Ny fanitarana dia mihantona ny volo eo amin'ny hanger ary mamela ny volony ho maina. HAMPIASAINA NY FAHALALAHANA MALAGASY SY MANAO NY MIRALENTA EO AMINAREO! TSY voadio ny volony.
Fa ny Afro Kinky Manaova volo eo amin'ny lamba famaohana ary avelao hivezivezy ny rivotra, izany dia hisoroka ny firoboroboana lehibe. Afaka mihantona amin'ny hanger ianao raha misafidy. Azafady mba ampiasao ny nify lava midadasika rehefa tsy misy volom-bolo raha tsy misy volom-bolo ary misy Denman borosy mamaritra ny fehiloha. Aza ritra maina.
Fa ny kinky mahitsy Afaka mivezivezy ianao na mibontsina ny volony.
Fa ny solovolo Jereo ny lahatsary fampianarana etsy ambany. Ho hitanao hoe ahoana no fomba fijery ny peratra amin'ny sary.
Eto aho ao amin'ny MyNaturalHairExtensions.com dia mino izahay fa hahazo ny bangahy indrindra amin'ny bug. Ny fividianana volo tsara dia mitondra anao hatramin'izao! Ny fitandremana ny volo, ny toro-hevitra, ary ny fikojakojana dia hiantoka ny faharetan'ny fanitarana anao.
Atsaharo ny fanararaotana alohan'ny hanatanterahana izany!
Avelao hiatrika fotsiny ny zava-misy, FANAFODY HAFATRA rehetra ... saingy misy fomba maro hampihenana ny fandatsahana.
Asio tombo-kase voalohany. Tena zava-dehibe tokoa izany! Manolotra fantsom-pitombenam-bidy ho an'ny $ 10 kely izahay.
Faharoa, TSY ampiasaina borosy boribory arakaraka ny fomba itiavany ny volo amin'ny volo samihafa ary manipy azy ireo amin'ny tsatoka. Ampiasao mandrakariva ny entana nify na biriky ahodin-drivotra.
Manadio sy manaja tsara ny volonao!
Mba hanadiovana ny volony dia soso-kevitra Fanamboarana akanjom-pirahalahiana Giovanni. Misy lafin-javatra tsy dia lafo loatra Herbal Essence Hello Shampoo Hydration.
Mba hanamafisana ny volony dia soso-kevitra Herbal Essence Hi Hydration (ny safidinay #1) na ny conditioner rehetra noforonina ho volo volo / volo.
Ataovy azo antoka fa efa voakilasy daholo ny sofina rehetra ary mihodina amin'ny làlana toy ny hoe omena poopy 2. Atsoroy eo amin'ny lafiny iray ny lohanao ary avelao ny rano hikolokolo tanteraka ny volonao, ary miara-miasa iray monja amin'ny fotoana iray. Ampio ny shampoo eo amin'ny palmao ary asio ny tananao hidina ny volonao amin'ny tifitra lava. Aza manosotra na manodina ny volony mba hamorona ranon-tsavony satria tsy hahavita hamotipotika fotsiny ny fako! Tohizo ny manindrona ny tananao amin'ny volonao mandritra ny minitra 5. Sasao amin'ny famelana ny rano hivezivezy amin'ny volonao toy ny teo aloha, dia azonao atao ny mamihina ny tananao amin'ny volo mba hampihena ny fantson-tsakafo saingy tsarovy fa TSY tsy mibontsina ny volony. Sasao amin'ny lamba famaohana ary avelao ny volo ho an'ny AIR DRY
Ampiasao ny fomba fiasa ho an'ny mpanadio anao sy ny fiasanao
Shampoo: Indray mandeha isaky ny herinandro 3
Miara-manasa (mandro): Matetika matetika no ilaina
MITADY FITIAVANA MALAGASY SY MANDEHA ITY
Zava-dehibe ny mitantana ny volonao alohan'ny handehanana any am-pandriana. Afatory amin'ny alina ny volonao amin'ny sola / satin-jiro na satroka satroka / satiny. Ny milina izay manome làlana ho an'ny lavany lava dia miasa tsara. (jereo ny sary etsy ambony)
Ho an'ny tontolon'ny fingadam-pokon-koditra dia manoro hevitra ny hametraka 5-10 kofehy na kofehy lehibe eo amin'ny volonareo ianareo ary mametraka izany eo ambanin'ny baoritra.
Ho an'ny tonta mivantana, manoro ny volonay ianao ary mametraka azy eo ambany satroboninahitra / satin.
Aorian 'ny fandehan-javatra mandritra ny alina dia hampitombo kokoa ny fanitarana anao, hijery tsara kokoa, ary hisoroka ny fanakanana izay mitarika ho amin'ny fandatsahana tafahoatra.
Tadiavo ny fanitarana anao toy ny hoe aiza izy ireo any amin'izay misy ny volonao voajanahary!
IZA NO IREO MPANJAKA IREO: Raha tia ny fanitarana ianao, dia ho tiany ianao! Ireto misy ny Do's & Don'ts ​
avelao ny volonao ho maina rehefa manapa-kevitra ny hipopotohana maina dia ampiasao mpiaro mafana foana
Rehefa manamboatra ny volonao amin'ny vokatra hafanana dia ampiasaina foana ny fiarovana ny hafanana MAHAFINARITRA miaraka amin'ny tavy mirakitra. Ny hafanan'ny hafanana dia mety miteraka fahasimbana amin'ny hafanana ary manova (manodina) ny endrika voajanahary voajanahary. Walmart dia manana fiarovan-dàlana maro samihafa mba hisafidianana. Ny hafanana nataon'i John Freida amin'ny fiarovana ny fiarovan-tenan'ny proteinina dia tsara ny mampiasa azy satria maivana sy maimaim-poana ny lanjany.
Araho ny fahazarana ataontsika amin'ny alina na mamorona ny azy manokana.
Araho tsara ny fomba fanasanay.
Ampiasao ny kirihitr'io alim-borona io sy ny takolaka nify
Miorena tsara ny volonao matetika
Raha mampiasa tolotra loko, kolaka, kitapo marevaka, na loko maharitra dia azonao antoka fa mitady teolojia matihanina na teknolojia loko. Tsy manome antoka ny kalita isika rehefa misy fanovana ara-tsimia, azafady mba ho azo antoka ny fiarovana ny fampiasam-bola.
AZO AMPIASA HIFANDRAY AMIN'NY HAFA! Ny volo dia manjary matematika sy mikororohoro rehefa ampidirina ny vokatra. Raha toa ka manatsara tarehy ianao ary te hanamaivana ny volonao na hampihenana ny frizz dia ampiasao kely ny serum anti-frizz. Raha manampy ny vokatra dia azonao atao ny manala azy ireo amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny Conditioner Hydal Essence Hello Hydration raha tsy miteraka fahamainana.
Aza miezaka manamboatra, manasa, na manongotra ny volonao rehefa reraka na maimaika! Izany dia fomba iray ho an'ny fahasorenana ary hahatonga anao ho henjana amin'ny volonao.
Aza mampiasa borosy borosy.
Aza manandrana ny fanovana simika amin'ny volo fitarihana matihanina
Ny fikarakarana ny volo amin'ny soratra tsirairay
TSY MISY ANTSIKA AN'ANDRIAMANITRA DEMONY IZANY! Fa ny fomba tsara indrindra hahavitrihana dia amin'ny rano fisotro madio sy ny lava-dranomandry lehibe. Hisy fiaraha-mikorisa koa hiasana. Ny fampiasana borosy Denman dia mety ho sarotra be, mandany fotoana ary afaka manosotra ny volony amin'ny tsorakazo. Aza manandrana manongotra ny volony rehefa maina. Ataovy azo antoka fa tena maina ny rano sy ny rano.
Ity volo ity dia mitondra tsara indrindra amin'ny fantsom-bokatra sy ny fanodikodinam-peo. Ny vokatra azo avy amin'ny firavaka tianao ho an'ny volonao voajanahary dia azo ampiasaina amin'izany. Ity volom-pitiavam-bolo ity dia tia moister tahaka ny volonao 4b 4c. Herisetra sy tsipìka mipetaka hatreny aoriana kely miaraka amin'ity volo ity ary manampy ireo fehiloha hikolokolo!
Jereo ity vokatra ity Lisitra eto amin'ity pejy ity.
Manoro hevitra ny fampiasana ny pensilihazo Denman na ny lavany dia nitondra menaka tamin'ity volo ity. Ity volo ity toa ny kinky afro dia tia ny fahamendrehana. Fialan-tsasatra tsotra fotsiny ao anaty fonosana ary ny rano no tsara indrindra.
Rehefa mampiasa mpisikana Denman koa ny mpangalatra dia mipoitra ireo bozaka.
Ity volo ity dia mila fikojako kely ary tsy tia vokatra betsaka. Tsy hitondra tsara amin'ny famokarana vokatra.
Raha azo atao dia andramo ny volonao amin'ny alina mba hampihenana ny fihenan-tsakafo sy hamoronana lay tsara tarehy ho an'ny ampitso.
Misaotra noho ny fitsidihany ny fitomboan'ny voloko!
Afro Kinky Wash Andro